Ukulahla i-bloatware ngumama kwaye okwangoku kufakwa kwi-verizon galaxy s7 ngohlaziyo
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-DT Ignite ngumama we-bloatware kwaye okwangoku kufakwa kwiVerizon Galaxy S7 ngohlaziyo
I-DT Ignite ngumama we-bloatware kwaye okwangoku kufakwa kwiVerizon Galaxy S7 ngohlaziyo
Ewe, ii-bloatware-iiapps ezisoloko zikho kuwe xa ungaze ufune ukuzisebenzisa. Ngumxholo oqhubekayo, ngokuqinisekileyo oxhaphakileyo kwiziphatho eziphathwayo, apho umboneleli oshukumayo aza kongeza ii -apps ezingafakwanga ezingafakwanga ezikhuthaza iinkonzo zayo, okanye iqabane elihlawulelayo. Umntu unokucinga ukuba emva kwako konke ukubamba kubasebenzisi, ababoneleli ngeeselfowuni banokujonga isisombululo, uhlobo lwendlela eyonwabileyo. Endaweni, ngaphezulu konyaka odlulileyo, I-T-Mobile kunye neVerizon zidibene nomboneleli ngenkonzo omtsha , ebizwa ngokuba yi-Digital Turbine. Ukuphindaphinda ngokukhawuleza-i-Ignite app ivumela umphathi ukuba afake ii -apps ngqo kwifowuni yakho, ngaphandle kokudlula kuvavanyo lomenzi, nangaphandle kokucela imvume kuwe.
Iingxelo malunga ne-Ignite zikhawuleze zanyibilika, kwaye kubonakala ngathi iapps ayiziphathanga kakuhle, okanye isetyenziselwa ukusasaza ngakumbi ubumbano. Kodwa ibuyile ngoku enye into ekhawulezileyo yempikiswano. Abasebenzisi beziphatho eziphathwayo zeVerizon ezikhutshwe yi-S7 baxela ukuba i-DT Ignite sele izifakile ngoku kwiifowuni zabo ngohlaziyo lwamva nje. Ngokwendalo, ukubona ukuba loluphi uhlobo lweemvume ezifunwa lusetyenziso, kujongeka ngathi kuyothusa ekuboneni okokuqala, kwaye abasebenzisi banokubonwa benyuka ngeengalo kwiReddit.
Ayisetyenziswanga ngokungathandekiyo njengoko kuvakala, nangona kunjalo. UVerizon ukhuphe ingxelo elandelayo ukuzama ukucima amadangatye kancinci:
Isoftware yeDigital Turbine (DT Ignite) isebenza kuphela ngexesha lokuqala ukuseta isixhobo esitsha kraca okanye ukuba isixhobo sihamba ngocwangcisa umzi-mveliso. Ukulandela ukuseta kokuqala, isoftware ayizukutyhala okanye ifake ii -apps ezintsha nangaliphi na ixesha ngasemva. Naluphi na usetyenziso olufakelweyo kwi-DT Ignite lususwe ngokupheleleyo kwaye lunokukhutshwa.
Umfanekiso:1yeMbiniKe, ngokusisiseko, Ignite ikhona kuphela ukuze uqiniseke ukuba ufumana iflat-fresh bloat yakho xa useta kabusha umzi-mveliso. Ngokufanelekileyo, oku kunokuthetha ukuba umphathi ophetheyo akadingi ukufaka iROM eguqulweyo kakhulu kwi-smartphone yakho ukuze ubhake kwii -apps zayo ezizizo; Endaweni yoko, kunokuba ne-Ignite apho ukwenza oku ngalo lonke ixesha ifowuni iphinda isethwe kwakhona kuseto lwe-vanilla. Iyavakala le nto, ewe, kodwa inyani yokuba iapp ineemvume ezininzi isenokuchaphazela uninzi.
Iindaba ezimnandi zezokuba nge-Android Marshmallow & apos; s granular controls, ungakhubaza ezo mvume kwaye ubone ukuba i-Ignite iyazibuza nangaliphi na ixesha, ezinokubonisa ukuba usetyenziso lusebenza ngaphaya kwenqanaba lokuseta umzi-mveliso. Ngenye indlela, ukuba ufuna nje ukuyisusa kwaye ungacingi ngayo kwakhona, ukukhubaza i-Ignite nge-App Manager nayo lukhetho olungenazo iziphumo ebezingalindelekanga ezichaziweyo.
umthombo: I-Verge : Reddit nge Ubergizmo
Kwii & t ze5g
Ixabiso le-iphone 5 kwii-metropcs
I-Apple iPhone X yovavanyo lobomi bebhetri ngokuthelekisa i-iPhone 8 Plus, i-Samsung Galaxy
I-Spigen Slim Armor CS Ityala le-Apple iPhone 6 yoPhononongo
Ngaba iApple Watch SE ayinamanzi?
I-Samsung Galaxy Tab S 10.5 ifumana uhlaziyo lwe-Android 6.0.1 Marshmallow kwi-AT & T.
IJava -Uwuguqula njani umtya ungene kwi-Int Ngemizekelo
Uhlaziyo lwe-Android 6.0.1 Marshmallow lubetha i-Samsung Galaxy S6 kunye nomda we-S6 kwi-T-Mobile
Iintambo ezi-5 zokutshaja kunye nedatha ezisebenza ngezixhobo zombini ze-Android kunye ne-iOS
I-Sprint ngoku inikezela simahla ukujikeleza kwamazwe aphesheya
Ixabiso le-LG G6 kunye nomhla wokukhutshwa
I-Apple Music ngoku iqengqeleka kwizithethi ezinobuchule zikaGoogle kunye nemiboniso